Ukuqonda indlela amaHlathi okuQala aMhlaba aphuhliswa ngayo
Ukuguqulwa kwamahlathi kunye neMithi
Isityalo se-vascular savela malunga ne-400 yezigidi zeminyaka edlulileyo kwaye saqalisa inkqubo yokwakha isakhiwo sehlathi ngexesha leSiliuriy geologic. Nangona kungengasona "umthi" weqiniso, ilungu elitsha lobukumkani bezityalo zomhlaba lwaba yintlangano yokuziphendukela kwemvelo (kunye neentlobo ezinkulu zezityalo) kunye nokuphuhlisa izixhobo zomthi kwaye ziqwalasela umproto-wokuqala. Izityalo ze-Vascular zavelisa amandla okukhula amakhulu kunye nobude obukhulu obufunekayo ukuze kuxhaswe inkqubo ye-plumbing yangaphakathi.
Umthi woqobo wangempela womhlaba waqhubeka ukuphuhlisa ngexesha le-Devoni kunye nososayensi bacinga ukuba umthi mhlawumbi uphelelwa nguArchaeopteris . Olu hlobo lwemihla olulandelwe kamva ngeminye imithi yomthi yaba yizilwanyana ezicacileyo eziquka ihlathi ngexesha lexesha laseDeboni. Njengoko ndikhankanyile, bezona zityalo zokuqala zokunqoba iingxaki ze-biomechanical zokuxhasa ubunzima obongezelelweyo ngenkathi zihambisa amanzi kunye nezondlo kwiifom (amaqabunga) kunye neengcambu.
Ukungena kwixesha leCarboniferous malunga neebhiliyoni ezili-360 kwiminyaka edlulileyo, imithi yayininzi kwaye inxalenye ebalulekileyo yendawo yokuphila yezityalo, eyona ndawo ikhona kwiindawo zokuthungela amalahle. Imithi yayihlakulela iindawo esiziqonda ngokukhawuleza namhlanje. Kuzo zonke imithi ezazikho ngexesha le-Devonian neCarboniferous, kuphela umthi womthi usenokufumaneka, ngoku uhlala e-Australasian rainforests. Ukuba kwenzeka ukuba ubone i-fern nge-trunk ekhokelela kwisithsaba, ubonile umthi womthi.
Ngethuba lexesha elifanayo lemihlaba, imithi ekhoyo manje equka i-clubmos kunye ne-horsetail enkulu iyakhula.
Ukuguqulwa kweGymnosperms kunye neAngosposps
Izidalwa ezihamba phambili ziyimithi elandelayo yokuthi ibonakale kumahlathi amandulo malunga neepiliyoni ezingama-250 kwiminyaka edlulileyo (ekupheleni kwePermian ukuya kwi-Triassic). Imithi emininzi, kuquka i-cycads kunye ne-monkey-tree tree, inokufumaneka kwihlabathi kwaye iqondwa kalula.
Ngokuthakazelisayo, ukhokho owaziwayo umthi we- ginkgo wabonakala ngeli xesha le-geologic kunye nerekhodi yezinto zasendle zibonisa ukuba abadala kunye nabadala bafana. Ihlathi lase-Arizona "elikhungulukileyo" laliyimveliso "yokunyuka" kwezinto zokuqala, okanye i-gymnosperms, kunye neengcingo ezibonakalisiweyo ezifakwe kwizinto ezifakwe kwizinto ezifakwe kwizinto ezinokuthi zenziwe zihlaziyiweyo zeemveliso ze-Araucarioxylon arizonicum.
Kwakukho olunye uhlobo lomthi, obizwa ngokuthi i- angiosperm okanye umthi onzima, okwenza intloko ngexesha le-Cretaceous okanye kwiminyaka eyi-150 yezigidi edlulileyo. Babonakala malunga nexesha elifanayo i-geologists bacinga ukuba umhlaba uyahlula kwilizwekazi elinye elibizwa ngePangea kwaye lahlukana kwiincinci (uLaurasia kunye neGondwanaland). Ekuqaleni kweso sikhundla seMatriki, iinkuni ezikhuni zazitshatyalaliswa kwaye zahlukahluka kwilizwekazi ngalinye elitsha. Oku mhlawumbi isizathu sokuba iinkuni ezinzima zikhetheke kwaye zininzi kuwo wonke umhlaba.
Ihlathi lethu leNguqulelo
Bambalwa ama-dinosaurs abakhe benza isidlo kwiqabunga elikhuni ngenxa yokuba bebalala ngokukhawuleza ngaphambi nangesikhathi sokuqala kwexesha elitsha "leminyaka engama-hardwood" (iminyaka eyi-95 yezigidi edlulileyo). Ama-Magnolias, i-laurels, i-maple, i-sycamores kunye ne-oki yizona zintlobo zokuqala eziza kwanda kunye nokulawula ihlabathi. I-Hardwoods yaba yintlobo ebalulekileyo yemithi ukususela kwimida-ntlupheko phakathi kwama-tropiki ngelixa i-conifers yayivame ukuxhomekeka kwiindawo eziphakamileyo eziphezulu okanye iindawo eziphantsi ezisezantsi.
Akukho tshintsho olwenzekile kwimithi ngokwemiqulu yabo yokuziphendukela kwemvelo ukususela kwiintendelezo ezenzeke ukuqala kwazo iminyaka eyi-70 yezigidi edlulileyo. Ukuthakazelisa ziintlobo ezininzi zemithi ezichasayo inkqubo yokuphela kwaye zibonise ukuba akukho nto ibonisa ukuba ziya kutshintsha kwenye i-miliyoni yesigidi. Ndatshilo i-ginkgo ngaphambili kodwa kukho ezinye: i-redwoodwood, i-Wollemi ipine, kunye nomthi we-monkey puzzle .
I-Point Sample Indlela yokuThuthukiswa kweMithi
Iimveliso zeMitha zasePrayimari zivunwa xa kuthengisa imithi
Ziziphi iintlobo zeMithi ezenza imithi emihle kakhulu?
Amahlathi ehlabathi kwilizwe elingapheliyo
Ungayithenga njani uMthi weKhisimesi
Indlela yokukhetha uLungelo lokuLoba lokuLungelo
Uludwe lweZikolo zoLuntu ze-Free Online kwiFlorida Abafundi, i-K-12
Imfazwe yaseMelika: iMandla Jikelele uGouverneur K. Warren
Ukutsala i-Pisces Man - Iimpawu Zothando